December 2018 – Page 2 – Heemaal News Network
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal maanta ka dhacay magaalada Baydhabo kadib markii halkaas lagu xiray Musharrax Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur. Wararka ayaa sheegaya in dagaalka ka dhashay xariga Abu Mansuur ay ku […]
Xildhibaanada Baarlamanka federaalka Somalia ee ku midoobay kutlada Badbaado Qaran oo War-saxaafadeed ka soo saaray magaalada Muqdisho ayaa si kulul u cambaareeyey xarigii maanta loo geystay Mukhtaar Roobow oo ka mid ahaa musharaxiinta doorashada KG. […]
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Qatar ayaa magaalada Dooxa kula kulmay dhiggiisa dalkaas, Shiikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani. Ra’iisul Wasaare Xassan […]
Nin Lagu Eedeeyay Inuu Facebooka ka Aflagaadeeyay Hoggaamiyaha Ruuxiga Iran Oo Xabsi ku Dhintay.
Nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha siyaasadda dalka Iiraan oo xirnaa muddo 60 maalmood ah isla markaasna cunnada ka soonnaa ayaa ku dhintay xabsiga, sida ay sheegeen qoyskiisa. Vahid Sayadi Nasiri ayaa lagu eedeeyay inuu caayay hoggaamiyaha […]